Warbixinta Qaramada Midoobey ee Dagaalka Gaalkacyo
Gaalkacyo: 7 ku Dhimatay Weeraro lagu Qaaday Masaajiddo
Sidoo kale, barakacayaashaa waxaa raad ku yeelanayo roobbabka Dayrta oo culeys ku noqonayo dadka banaanada u hoyanaya. 80% dadka barakacayaasha ah waa waayeel, haween iyo caruur. Sida ay warbixinta qortey, tan iyo intii uu dagaalku biloowdey 4 duulimaadyo oo gaalkacyo tagi lahaa ayaa la baajiyey arrimo amni dartood. Dagaalka Gaalkacyo waxaa kale oo uu saameeyey waxbarashadi, 20.000 oo ardey ayuu dugsiyadi waxbarashada ka hor istaagey. Hay-adihi gargaarkana waxaa ku yaraadey howlawadenadi maadaama arrimo amni awgood uu dhaqdhaqaaqi magaalada yaraadey. Sidoo kalana, nolasha bulshada waxaa raad ku yeeshay ganacsigi oo intiisii badneyd xirmey, inta soo harteyna ay furitaankoodu xadidanyahay. Dadka reer miyaga ah iyo kuwa ka ganacsado xoollaha oo iyaguna ku xirnaa suuqa xoollaha ee Gaalkacyo ayuu dagaalku saameyn ku yeeshey. Ganacsatadan ayaa xoollo baddan ku rarta gaadiid iyaga oo u safriyo magaalada Boosaaso. Magaalada Gaalkacyo waa mid xudun u ah dalka maadaama ay isku xirto gobolo baddan sida Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug oo ay caasimad utahay. Dallaga beeraha kasoo go'a ee koonfurta iyo bartamaha dalkana waxaa qaybo baddan oo ka mid ah ay maraan isla Gaalkacyo.